Dasic Fernández mandoko graffiti be loatra any New York | Famoronana an-tserasera
Ny fomba fijery dia afaka manome endrika hafa ary fahitana hafa amin'ny asa tahaka ny mitranga rehefa mijery ny karazan-javatra rehetra toy ny fiainantsika na ireo zava-mitranga mitranga eo amin'ity fiarahamonina ity izay mandeha haingana tsy voafehy ianao. Amin'ny lafiny iray dia afaka mahita asa plastika izay mamadika ny rindrina volondavenona ho feno loko sy fiainana isika.
Izany no mitranga amin'ity tolo-kevitra famoronana amin'ny endrika a rindrina vita ambanin'ilay tetezana avy amin'ny artista Dasic Fernández. Amin'ny fomba fijery izay ahafahantsika mankafy an'io andiana tranobe miova endrika cubic io amin'ny sary lohateny.
Dasic dia a Mpanakanto Shiliana monina sy miasa any New York izay amoronany sary hosodoko marobe, sary hosodoko, sary sokitra ary asa hafa amin'ny fomba maro samy hafa, fa izay manana demonia mahazatra toy ny loko.
Iray amin'ireo asany manaitra azy indrindra ny sanganasa goavambe nolokoiny tany Newburth, New York. Raiso ny halavan'ny tetezana rehetra eo ambaniny ambany hamoronana ny vokan'ny eo anoloan'ny rindrina goavambe izay nandokoany ilay sary hosodoko feno fiainana, loko ary fomba fijery. Rindrina izay mameno ireo toerana malalaka kokoa eo ambanin'ny tetezana miaraka amin'ny loko ary miaraka amin'ny fomba fijeriny mahatalanjona dia afaka mamorona ireo banga banga ho lasa zavatra azonao iainana.
Dasic dia tsy vitan'ny hoe nitondra ny sary hosodoko tany amin'ny araben'i New York, fa koa hita any amin'ny tanàna hafa toa an'i Austin, Chicago, Detroit, New York, Toronto, Sao Paulo, Rio de Janeiro ary Buenos Aires.
Rindrina lehibe iray avy amin'ny fomba fijery izay nakana ny sary, mila fotoana kely vao mahatsapa fa miatrika tetezana isika fa tsy rindrina goavambe.
Miaraka amin'ny fomba fijery hafa, ireo graffiti na mural hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Rindrina mamirapiratra nolokoina teo ambanin'ny tetezana nataon'i Dasic Fernández